MyanCare | ဖေဖေ မေမေတို့ ရဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ညဘက်ကြီး မရပ်မနား အော်ပြီး ငိုယိုနေတာမျိုးနဲ့ ကြုံဖူးကြမှာပေါ့ ?
ဖေဖေ မေမေတို့ ရဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ညဘက်ကြီး မရပ်မနား အော်ပြီး ငိုယိုနေတာမျိုးနဲ့ ကြုံဖူးကြမှာပေါ့ ?
သူတို့လေးတွေဟာ ဘယ်လို ခံစားနေရလဲဆိုတာလဲ ပြလဲမပြနိုင် ၊ သိအောင် မပြောတတ်တဲ့ အရွယ်ကလေးတွေပါ။ ငိုတယ်ဆိုတည်း တစ်ခုခုကို ပြောချင်နေလို့ ၊တစ်ခုခုကြောင့် နာကျင်နေလို့ဘဲ ပေါ့နော်။
အဲ့လို ကလေးငယ်လေးတွေ ငိုနေ ရင် ဖေဖေ မေမေတို့ ကမမေ့လျော့ဘဲ ကလေး ရှုးခံ (Diaper) ကို လှန်ကြည့်ကြဖို့လုံး၀ မမေ့ပါနဲ့။
မေမေတို့ ကလေးငယ်လေးတွေကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးတဲ့ အခါမျိုးမှာကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ညအိပ်ခါနီး ကလေးလေး ရှုရှုးပေါက်ထားတာ မသိပဲ၊ အချိန်အကြာကြီး ပေါင်ခြံတစ်ဝိုက်မှာ ဆီးတွေ ကျန် နေတဲ့အခါမှာမျိုး မှာဖြစ်ဖြစ် ဆီးပူလောင်တာ မျိုးကို ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးလေးတှရေဲ့ အသားအရေ ဟာ အငမြတနမြှ နူးညံ့လှပါတယြ။ ရှုးရှုး ၊ အီအီး ၊ ရေ အစရှိသညတြို့က ကလးငယရြဲ့ အရပှေားပေါမြှာ အခွိနကြှာကှာရှိနတေဲ့ အခါမှာ ပှတရြငြးတိုကရြငြးနဲ့ပေါငခြှံ တဈဝိုကြ ယောငရြမြးကာ အရပှေားကပူလောငပြှီး နာလို့ အောငြိုလေ့ ရှိပါတယြ။
ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ဖေဖေ မေမေတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ပေးကြပါသလဲ။
ညကြီး အချိန်မတော် တဗြဗြဲနဲ့အော်ငိုနေတဲ့ ကလေးလေး အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲ? ။
ကျွန်မတို့ ရင်သွေး Call Center ဟာ ကလေးအထူးပြုကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များဖြင့် ၂၄ နာရီ (၇)ရက် ပိတ်ရက်မရှိ အထူးနွေးထွေး ထိရောက်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ မေမေတို့ စိတ်ကြိုက်၊ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်၊ အရေးကြီးရင် ကြီးသလို မနက် ၂ နာရီ၊ ၄ နာရီလဲ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နေရာဒေသ မရွေး မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့မှခေါ်ပြီး မေးမြန်းနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။